थपिने मन्त्रालयमा नवलपुरका सांसदको चान्स कति ? कामको चाप घटाउन मन्त्रालय थपिन्छ ःमुख्यमन्त्री गुरुङ
By administrator on	 August 1, 2020 देश, फोटो फिचर, राजनीति, स्थानीय, स्थानीय तह
डोलराज रानाभाट, १७ साउन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले छिट्टै मन्त्रालय थप्ने बताउनुभयो । प्रेस संगठन नेपाल जिल्ला शाखा नवलपुरद्धारा आज कावासोतीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।एउटै मन्त्रालयले धेरै प्रकृतिको काम गर्नु परिरहेको र यसैको चापलाई कम गरी जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन पनि कानुन सम्मत नै मन्त्रालय थप्ने बताउनुभयो । आज नवलपुर आउनु भएका गुरुङले अहिले एउटै मन्त्रालयबाट धेरै प्रकृतिका कामहरु गर्नुपरेका कारण जनताले सहज सेवा पाउन नसकेको भन्दै मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय अघि वढाउने बताउनुभयो । त्यसका लागि केन्द्र सरकारको निर्णय आवश्यक पर्ने हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग आफूले छलफल गरेको बताउनुभयो । मन्त्रालय थपिएपछि नवलपुरका सांसदले मन्त्री वन्ने मौका पाउनुहुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा भने मुख्यमन्त्री गुरुङले ठोकुवा गर्न नसक्ने बताउनुभयो । जिल्ला पिच्छे मन्त्री वनाउन कहाँ सकिन्छ र ? तर असम्भव पनि केही छैन उहाँले भन्नुभयो । साथै मुख्यमन्त्री गुरुङले कावासोतीलाई नमुना सदरमुकाम वनाएरै छाड्ने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले बजेट दिनेमा कुनै कन्जुस्याई नगर्ने प्रष्ट पार्नुभयो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण दुम्कीवास त्रिवेणी सडकले पूर्णता नपाएको भन्दै निकुञ्ज ऐन परिवर्तनको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो ।
साथै पार्टीका स्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका गुरुङले पार्टीमा झगडा सिद्धान्त र वैचारिक नभई व्यक्तिको झगडा रहेको जुन अनावश्यक भएको बताउनुभयो । जनतासँग ५ वर्ष स्थायी सरकार हुन्छ भनी कसम खाएर आउँदा अहिले आएर प्रधानमन्त्री परिवर्तन अनावश्यक वहस भएको बताउनुभयो । पार्टी भित्रको विवाद समाधानको एक मात्र वाटो सहमतिमा एकताको महाधिवेशन भएकाले चाँडै महाधिवेशन गर्न शीर्ष नेतृत्व लाग्नुपर्ने बताउँदै अहिलेको झगडा तत्काल वन्द गरी विद्यान सम्मत सवै नेता अघि वढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैविच मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङ र नेकपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेलाई राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल नवलपुरले प्रदेश नाका गैडाकोटमा स्वागत गरेको थियो । जिल्ला संयोजक कृष्ण कंडेलको नेतृत्वमा स्वागत गरिएको हो । मुख्यमन्त्री गुरुङ नारायणी नदिमा आएको बाढिले पुर्याएको क्षति अवलोकन गर्न र नेकपा गण्डकी प्रदेश सदस्य स्वर्गिय कुल चन्द्र महतोको श्रद्धाञ्जली सभामा सहभागी हुन नवलपुर आउनुभएको थियो ।